Maxaa Ka Jira in Kim Jong-un Uu Dhintay? | Xaqiiqonews
Maxaa Ka Jira in Kim Jong-un Uu Dhintay?
Warbaahinada qaar ee dunida ayaa qoraya in hogaamiyihii bir calaanjiyaha ahaa ee reer Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong in uu dhintay,halka kuwa kalane ay sheegayaan in hogaamiyuhu uu ku sugan yahay xaalad “miir daboolan ah”.
Warbaahiyaasha Hong Kong ayaa tabiyey in Kim Jong un, uu dhintay, iyaga oo soo xiganaya waxa ay ugu yeereen “ilo qarsoodi ah”.
Wargeys ka soo baxa Japan ayaa qoray in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong un uu ku sugan yahay xaalad miir daboolan ah ka dib markii uu galay -sida ay sheegeen- qaliin xagga wadnaha ah horaantii bishan aynu ku jirno.
Sidoo Kale Aqri..Sirta Ka Dambeysa In Kim Jong-un Uu Musqushiisa horay u soo qaatay
Ma jirto ilaa hadda cid si rasmi ah u xaqiijin karta geerida Kim, hase yeeshee wararka la xariira xaaladda caafimaad ee Kim Jong ayaa noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa todobaadkan ee Warbaahinta galbeedka ay qoreen.
Haweeneydii ugu horeysay ee hogaamisa K. Waqooyi
Waxaa jira sadaal badan oo laga bixinaayo cidda badali karta Kim Jong, waxaase loo badinayaa in talada dalkaasi ay majaraha u qaban doonto Kim yo Jong oo ah walaashiis ka yar.
Kim Jong ayaa la wareegay talada dalkaasi sanadkii 2011, ka dib markii uu dhintay aabihiis Kim Jong-il oo dalkaasi soo xakumaayey 1994 ilaa 2011.